ရောဘတ်စက်ရုပ် — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
“ရောဘတ်စက်ရုပ်” ငါ၏အလာမည့်အယ်လ်ဘမ် "ဒီကောင်းမွန်သောဘဝအသက်တာ၏ပထမဦးဆုံးသီချင်းဖြစ်ပါတယ်” April လထုတ် 10. သီချင်းနှင့်အခမဲ့ download မှသီချင်းစာသားကိုအောက်တွင်ရှိပါသည်
ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုငါ့စက်ရုပ်အဝတ်အစားတွေအတွက် chilling ခဲ့သည်
Living စက်ရုပ်နည်းလမ်းများ, ငါသိအားလုံးရဲ့အကြောင်းရင်း
ငါသည်ငါ့စက်ရုပ်ဝိညာဉျကိုမှလွတ်မြောက်နိုင်ကြားသိမှီတိုငျအောငျ, ငါတူရယ် ...
ငါမရယ် '' အကြောင်း, ယခုတွင်ငါသည်စက်ရုပ်မဟုတ်ဘူး
ငါမင့်, ငါမင့်, ငါစက်ရုပ်မဟုတ်ဘူး
ငါမင့်, ယခုတွင်ငါသည်တဲ့စက်ရုပ်မဟုတ်ဘူး (2X ကို)
တစ်ဦးကိုမှန်ကန်ယောက်ျားသည် လာ. ,, ငါသိသောအရာရှိသမျှသည်ပြောင်းလဲခြင်း
သင်တို့မူကား, ရှုံးနိမ့်ခဲ့ကြ, နှင့်သင်၏အာဏာကိုညှစ်ခဲ့
သင်တို့အားငါသည်မုသာကိုချစ်သိ, ငါမူကားတည်ငြိမ် tryna ပြောင်းလဲမှုပေါ့
သငျသညျရှုပ်ထွေးခဲ့ mighta, ဒါပေမဲ့ဒီအသစ်တစ်ခုနေ့က
ငါ၏အဆွေရန်, lockdown အပေါ်နေဆဲနေသော
ငါမင့်, ငါမင့်, ငါစက်ရုပ်မဟုတ်
Troy တုန်လှုပ် • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:36 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါဘုရားသခင်သည်သင်၏အလုပ်အားရနှစ်သက်ယုံကြည်တဲ့သီချင်းဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါသတင်းစကားကိုငါ့ထံသို့ရှင်းပါတယ်. ငါအကြံပြုချက်ဆယ်နှစ်အဟောင်းကြောင့်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကိုနားထောင်သူတို့ကကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်သူတို့ကိုမမေးနှင့်သီချင်းသူတို့ကိုဘာကိုဆိုလိုတာလဲငြိမ်းချမ်းရေးတစ်ဦးသညျဘုရားသခငျကောင်းကြီးပေးတော်မူပါစေစေလျှင်.
Shak • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:37 နံနက် • ပြန်ကြားချက်